Ndị ọbịa Korea hụrụ Guam n'anya na GVB ji abụ nabata ndị njem T'way
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » Ndị ọbịa Korea hụrụ Guam n'anya na GVB ji abụ nabata ndị njem T'way
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guam • News • Iwughachi • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Guam na -anabata ndị ọbịa Korea - nke mbụ mgbe COVID -19 gasịrị
Guam Visitors Bureau (GVB) na AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) nabatara ụgbọ elu mbụ si Seoul, South Korea na 2021 mbubreyo Satọde.
Ụgbọ elu B737-800 si Seoul, Korea bịa, bute ndị njem 52 n'agwaetiti ahụ.
Ọ bụ ụgbọ elu na -arụ ọrụ T'wa, ụgbọ elu ụgbọ elu mbụ maliteghachi ọrụ ikuku oge niile otu izu n'izu malitere na July 31st.
Ndị isi njem nlegharị anya sitere na Guam Visitors Bureau yana onye na -agụ egwú mpaghara na -amụmụ ọnụ ọchị na ụbọ akwara ya nabatara ndị njem na -abata n'ụgbọ elu T'way si Seoul gaa Guam na Satọde.
Guam bụ mpaghara agwaetiti US na Micronesia, na Western Pacific. Ọ dị iche n'ụsọ osimiri ebe okpomọkụ, obodo nta Chamorro, na ogidi latte ochie. A na -ahụ mkpa WWII nke Guam na Agha na Pacific National Historical Park, nke saịtị ya gụnyere Asan Beach, bụbu ọgbọ agha. Ihe nketa agwaetiti nke agwaetiti ahụ pụtara ìhè na Fort Nuestra Señora de la Soledad, n'elu bluff na Umatac.
T'way Air Co., Ltd., nke bụbu Hansung Airlines, bụ ụgbọ elu South Korea dị ọnụ ala dabere na Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul. Na 2018, ọ bụ ụgbọelu nke atọ kachasị ọnụ ala Korea na ahịa mba ụwa, buru nde mmadụ nde 2.9 na nde mmadụ nde 4.2.
Ọtụtụ ụgbọ elu agbaala mbọ ka ụgbọ elu si Korea na Guam ruo n'ọnwa Ọgọstụ. Ikuku Korea ga -amaliteghachi ọrụ ikuku n'izu na -eso ya na Ọgọstụ 6 yana ọrụ ikuku kwa izu. Jin Air ga-amalite ụgbọ elu izu abụọ kwa izu malite na Ọgọstụ 3 na Ọgọstụ 6.
"Obi dị anyị ụtọ na ndị ọrụ Korea na -amaliteghachi ọrụ na Guam. Nraranye ha bụ nzọụkwụ ọzọ na -aga n'ihu na mgbake nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Guam na ohere igosipụta mmụọ Håfa Adai, "Onye isi ala na onye isi GVB Carl TC Gutierrez kwuru. "Anyị na ndị mmekọ njem anyị na ndị njem na -aga n'ihu na -arụsi ọrụ ike iji gosipụta ọdịbendị CHamoru ma bulie ahụmịhe Guam n'ozuzu ya."
Nhazi oge ụgbọ elu Korea maka ọnwa nke August:
Airline Mbata Time Ike ụgbọ elu/oche Gbọ elu Mba Frequency
ugbua Julaị 31, 2021 (ụgbọ elu mbụ)
Ọnwa Nke Asatọ 7, 14, 21, 28, 2021 11: 40 PM Oche B737-800/189 TW301 1x kwa izu
Korean Ikuku Ọnwa Nke Asatọ 6, 13, 20, 27, 2021 1: 00 AM B777-300ER/ 277 oche KE111 1x kwa izu
Jin ikuku Ọgọstụ 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 2021 2: 45 PM Oche B737-800/189 NZZ641LJ771 2x kwa izu
The Amlọ Ọrụ Gọọmentị Guam (GVB) emebekwala ọrụ ekele mbata iji nabata ụgbọ elu na -ebido n'ọnwa niile. A na -atụ anya ụgbọ elu ejikọtara ọnụ ga -enye Guam ihe dị ka oche 3,754 ruo ngwụcha Ọgọstụ. E rerela ihe karịrị oche narị isii ugbua.
Guam ji nwayọ na -agbalị ịlaghachi ka ọ bụrụ ebe njem nlegharị anya America na Oke Osimiri Pasifik.
Nchọpụta ọhụrụ nke Nazi gbanwere akụkọ ihe mere eme na Nzuzo Britain…
Smart TV na-enye ụdị ihe nkiri ọhụrụ
Smart Monday na IMEX America: Nzukọ Ndị Enyi ochie
Mgbakọ Barcelona na-akọwapụta ọdịnihu ga-adigide nke…
Chapman Freeborn ụlọ ọrụ ụgbọ elu UK mepere ọhụrụ…
Ndị London ga-eduzi mgbake njem ntụrụndụ n'afọ na-abịa